Ama-Eclairs nge-curd ayisikhilimu hhayi nje kuphela
Ukudla nokuphuza, I-Desserts
I-Eclairs - intandokazi yizo zonke izidakamizwa, ngokuvamile zipheka ama-eclairs nge-curd ayisikhilimu. Yona kanye igama elithi "eclair" linezimpande zaseFrance. Leli yigama lekhekhe le-pastry nekhilimu. Ngaphezulu kwayo igcwele i-glaze
Akunzima ukupheka ama-eclairs nge- curd ayisikhilimu . Kodwa ngaphambi kokuba sigcwaliswe sisenesikhathi sokufinyelela, kodwa okwamanje, ake siqale ngokuhlolwa. Ngenxa yalokhu, izithako ezilandelayo ziyasetshenziswa: amafutha, ufulawa, amaqanda, amanzi, usawoti.
Thatha ibhotela (100 amagremu), usike ngamagumbi, uwabeke epanini elincane bese ubeka umlilo omncane. Amafutha ashukunyiswa aze agcobe. Ibhotela elicibilikile lisetshenziselwa ingilazi yamanzi, usawoti wanezelwa. Mlilo kancane ukwandise futhi ulethe le ngxube emathunjini. Ngemuva kwalokho, umlilo usenziwa omncane. Ekhuthazayo njalo, ingilazi kafulawa ithululelwa emanzini abilayo. Gwema kuze kube nesisindo esibushelelezi esicwebezelisayo ngaphandle kwezimpumputhe. Emva kwalokhu, vumela uhlolo ukuthi lupholile kancane. Inhlama ehlihliwe engeza amaqanda amane (eyodwa ngenye), uqhubeka ukusigcoba.
Amaqebelengwane akhiwe emgqumeni olungiselelwe. Thatha isikhwama esikhethekile se- confectioner (i-aka "syringe's syringe") nge-tube elibushelelezi bese ucindezela emgodini wokubhaka ngesimo se-tubes noma amasoseji ngobude be-10, nobubanzi obuyi-2 cm. Ibanga eliphakathi kwawo kufanele libe okungenani u-5 cm. Uma kungekho isikhwama se-confectionery, Izibhuku ngesandla, kuphela le mafutha izandla zakho.
Bhaka inhlama emaminithini angu-20-25 kuhhavini elifudumele. Emaminithini angama-10 emva kokuqala kokubhaka, amaqebelengwane ayovuka futhi ekugcineni abe namahloni. Ngemuva kwalokho, umlilo ohhavini uncishisiwe futhi uqhubeke ubhake eminye imizuzu engu-15. I-eclairs kumele ibe nehle futhi iqine.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-ovini ayikwazi ukuvulwa! Amakhekhe angakwazi "ukuhlala" futhi kuzovela ama-pancake.
Ngesikhathi ama-eclairs epholisa phansi, aqala ukugcwalisa, okungukuthi, ukhilimu.
Kunezinhlobo ezintathu ezijwayelekile kakhulu zezilwanyana.
Inketho 1. I-Eclairs nge-curd ukhilimu.
Sebenzisa: i-cottage shizi, ushukela, ukhilimu omuncu noma i-yogurt.
Thatha amagremu angama-200 e-cottage shizi. Hlanganisa ngama-gramu angu-150 ushukela bese ufaka ama-gramu angu-200 wekhilimu omuncu noma i-yogurt uphinde uhlanganise kahle. Ukuxuba okulungiselelwe kufakwe esiqandisini cishe cishe isigamu sehora, ukuze kuqiniswe kancane. Bese ugcwalisa ukhilimu ngamaqebelengwane nama-eclairs ngekhanda le-curd ukhilimu.
Okukhethwa kukho 2. Ama-Eclairs namafutha okhilimu.
Basebenzisa: ibhotela, ubisi, iqanda, ushukela.
Thatha ishukela (1 ingilazi) uphinde uyigcobe ngeqanda. Le ngxube idluliselwa epanini, yengeze isigamu sendebe yobisi, futhi, ngokuqhubekayo ivuselela, ulethe isisindo endaweni yokubilisa. Bese ususe ingxube emlilweni. Ngenkathi ipholile, thatha igremu le-200 ibhotela. Hlanganisa kahle futhi uthele ingxube elungiselelwe kuyo ngezingxenye ezincane, ukuxuba kahle. Uma udinga ukhilimu ushokoledi, ungangeza i-cocaa powder encane. Ukhilimu usulungile.
Okukhethwa kukho 3. Ama-Eclairs ngobisi obilisiwe obilisiwe.
Esikhathini samapuphu, faka ummbila wobisi obomvu obilisiwe (ngaphandle kokukwazi, ngokuqinisekile), ukuwuhlanza ngamanzi uphinde uwubilise emlilweni omncane. Beat nge ibhotela mixer (200 amagremu). Kufanele kube mhlophe. Khona-ke, ngenkathi uqhubeka ushaya, gcolela kancane kancane, ingxube yobisi oluncibilikile ngamanzi. Ukwenza ukhilimu ube mnene kakhulu, ungangeza ubisi oluncibilikisiwe olungavunyelwe futhi uhlanganise kahle. Ukhilimu usulungile.
Ukuze ukunambitheka ukhilimu ophelile we-zhellanii ungangezela isinamoni, i-vanillin, i-liqueur noma i-cognac.
Manje qhubeka ugcwalisa amaqebelengwane. Ngenxa yalokhu, eclair esiphelile, ngakolunye uhlangothi, yenza ukuhlungwa okuncane. Ngalesi sici, usebenzisa isikhwama se-pastry, faka ukugcwaliswa ngaphakathi kwe-eclair.
Futhi ukuthinta kokugcina yi-icing icing.
Ukwenza i-icing, uthathe ibhotela le-chocolate, uyiqhekeza zibe yizicucu, uyibeke epanini bese uncibilika. Emva kwalokho, engeza izipuni ezimbili ze-ukhilimu omuncu bese uletha emathumba, ngenkathi ushukumisa. Faka isicelo se-icing kumaqebelengwane ngokushesha.
Uma kungekho isifiso sokuphikisana ne-glaze, kufakwa esikhundleni soshukela oluyimpuphu.
Yilokho konke. I-eclairs isilungile. Bon appetit!
"Amapayipi" amakhukhi: iresiphi, amathiphu
I-Corny (imigoqo yokudla kanye nezitshalo): incazelo, ukuthanda, ukubuyekezwa
Ikhekhe eliyinkimbinkimbi lekhekheji eminjini emine emizuzwini emihlanu
Kanjani ukuba anakekele isikhumba ebucayi ebusweni? isikhumba ebucayi Ikakhulukazi. Amathiphu, Tricks
Ezikhiqiza amaqanda e abesifazane: indawo. Anatomy Human e Isithombe
Carmate Zutto 3 isitayela: imfundo ngesiRashiya, ukubuyekezwa
Isithombe se- "ndoda omncane" enkondlweni "lethusi wehhashi" (A. S. Pushkin). Isithombe se- "ndoda omncane" ezincwadini Russian ...